Nhazi vidiyo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nchịkọta: Nhazi nke vidio
Kedu ihe dị iche n'etiti ihe adobe na cc na cs index? Dịka ọmụmaatụ 7 na cs 6 c premiere pro cc
Kedu ihe dị iche n'etiti mmemme Adobe na cc na cs index? Dịka ọmụmaatụ, premiere pro cc 7 na cs 6 CS - Creative Suite weputara ụdị isii nke CC- Creative Cloud wepụtara…
onye maara ihe SMOS matrix dị iche na BSI CMOS
onye maara etu matrik nke SMOS si di iche na BSI CMOS Enweghị “backlight” ebe a… na nkenke, mgbe ahụ na “nkịtị” CMOS ìhè na-adaba na mkpụrụ ndụ site n'otu akụkụ…
Kedu ka Sony Vegas si eme?
Etu esi eme okwu ndị dị na Sony Vegas? Aga m atụkwasị onwe m. N'ebe a, ị nwere ike bulie "Enyemaka" Russian maka Sony Vegas Pro 8.0. O nwere nkọwa zuru oke banyere ọrụ ndị dị mkpa "ProType Titler" ...
Kedu ihe bụ Futazh? Ebee ka m nwere ike ibudata?
Ihe na 01.09.2018 18.09.2018
Kedu ihe bụ Futazh? Ebee ka m nwere ike ibudata? mp3real.ru Futazhi ugbu a site na ejiji, mgbe ụfọdụ, ọnụnọ ha na vidiyo na-egosi na enweghi ọhụụ nka site na ntinye. Ya mere, gbalịa ka ị ghara ịkwanye ...
Kedu ihe bụ IFrame AJAX transport IFrame: transportgbọ njem a nwere ike ịbụ ebe kachasị arụ ma sie ike, kamakwa aghụghọ dị na ya - nke kachasị. Mgbanwe dị mfe ...
Kedu ka esi tinye ederede na vidiyo?
Etu esi tinye ederede na vidiyo? Tapawa vidiyo gị n’ime nchịkọta akụkọ vidiyo ọ bụla, lelee ebe nsonaazụ ya dị - okwu ahụ - ederede, pịa ma dee ihe ịchọrọ!
Esi emegharị vidiyo na Sony Vegas
Esi emeghe vidiyo na Sony Vegas Olee otú ị ga-esi tụgharịa? 1. ihu ala 2. N'ihu n'ihu Na-akọwa zuru ezu ebe a http://kanst.mediatory.ru/ ugbu a enweghị m Vegas arụnyere. Edere m na ebe nchekwa ...
Ònye bụ Diana Naykova? Ònye ga-ewe ya?
Ònye bụ Diana Naykova? Ònye ga-ewe ya? Naykova Diana (Diana Naikova) bụ a na-ewu ewu na-eto eto Russian videoblogersha, a mụrụ na 2000 afọ, ọ na-ama maka, nke eliminates letsplei akpali egwuregwu kọmputa na ...
Kedu esi ewepu video?
Olee otú ị ga-esi gbanwee vidio ahụ? BỤGHỊ ỤBỌRỤ Ọfọn, olee otu ị ga - esi kọwaa ya, ebe ọ bụ na ị kọwaghị editọ nke ị na - arụ ọrụ? Na Sony Vegas. Pịa na video vidiyo na bọtịnụ nri, na-etinye ...
Olee otú iji zoputa vidio na avi format na Adobe Premium Pro?
Etu esi echekwa avi vidiyo na Adobe Premium Pro? Ọ bụrụ na ọ bụ naanị na agaghị m agha ụgha (arụbeghị m ọrụ na Premiere ogologo oge) Faịlụ - Mbupụ na ụdị mmemme bụ nke a ???? Oge mbu…
OTÚ ỊDỤGHỊ anya nke avi video file? Ịdekọ site na ekwentị gbanwere nnọọ jụụ
OTÚ ỊDỤGHỊ anya nke avi video file? Ndekọ ederede site na ekwentị wee dị jụụ. A na-eme nke a na mmemme nhazi ngwa ngwa. M ga-eji CoolEdit. Ọ bụrụ na mmemme gị enweghị ike ibudata ụda n'onwe ya ...
AKWỤKWỌ na-ekwu na okwu a ka a kwụrụ, ...
GN does ka okwu a ga - ebibi… Kedu ụdị enweghị nchegharị, nwa agbọghọ? Ntak emi "idikwe"? Enwere ike ịka mma - "gbagọrọ agbagọ"? Ma ọ bụ laghachi? A naghị agbanwe ya kpamkpam na Russian, mana ihe pụtara doo anya)))))) PPC enweghị atụ, ihe oge. Ọ dị mkpa ...
kedu ihe kachasị mfe maka ịkụcha video?
Ihe na 22.08.2017 19.09.2018
kedu ihe kachasị mfe maka ịkụcha video? SolveigMM AVI Trimmer + MKV Free video editọ editọ, gbanwee ngwa ngwa faịlụ AVI na-enweghị ọdịda àgwà. Ihe omume a dị mfe, na adaba ...
Kedu ka esi budata ihe nkiri si YU-TUB?
Etu esi eweputa ihe onyonyo site na U-TUB? Eleghi anya ọ bụ. Budata mmemme ORBIT. Ma gha wa. m sun kọwara n’ezie, tupu youtube ede 2 s (nweta ssyoutube.com…) ma soro njikọ YouTube…
Kedu ihe bụ usoro MKV a? Kedu onye ọkpụkpọ m nwere ike ịhụ ya? Daalụ.
Gịnị bụ usoro vidiyo MKV a? Kedu onye egwu m nwere ike ilele ya? Daalụ MKV abụghị usoro, mana akpa (ụlọ, kwuo ya) nwere video, audio ... data. Lelee ...
Ònye maara usoro ị chọrọ iji tọghata vidiyo iji bulite ya na youtube?
Knowsnye mara usoro ịchọrọ ịtụgharị vidiyo iji bulite ya na youtube? AVI, MP4, FLV - ụdị ndị a niile Youtube na-aghọta nke ọma, naanị mmachi bụ na vidiyo ahụ kwesịrị…
esi mee ka igwu egwu vidio na-aga n'ụlọ?
esi mee ka igwu egwu vidio na-aga n'ụlọ? Ịzụta ngwa-egwu vidiyo, ị nwere ike USB, ị nwere ike ma tinye ya n'ime usoro ahụ. Jikọọ onye na-edekọ vidiyo na ihe nkiri vidiyo, tinye teepu nke chọrọ nyochaa na teepu teepu. Meghee usoro ihe omume ...
Kedu onye nchịkọta vidio nwere ọrụ nke iwelata vidiyo, na android?
Kedu onye nchịkọta vidio nwere ọrụ nke iwelata vidiyo, na android? Na android? Nke a bụ usoro mmezi vidiyo maka ekwe ntị? Ngwaọrụ, dị ka m na-echeta, bụ usoro sistemụ maka cellular, mbadamba ...
Otu esi egbutu ihe odide vidio na Youtube wee chekwa ya.
Etu esi ebipu mpempe vidiyo na Youtube ma chekwaa ya. Ana m ewere eserese vidiyo na QuickTime Player Enweghị ụdị mmemme ahụ! Naanị budata ihe niile ma wedata iberibe ahụ n'onwe m ... Amaghị m otú m ugbu a ...
kedu esi esi kpoo vidio karịa 1 GB online?
kedu esi esi kpoo vidio karịa 1 GB online? Tinye usoro n'efu ma belata. Free Video Dub http://www.dvdvideosoft.com/ru/products/dvd/Free-Video-Dub.htm Na-efu ala karịa 20 MB. nke a ngwa ngwa n'enweghị nsogbu. Na na na online .. ...
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,456.